တီဗီအဆင်သင့်အနေအထား remove Emulator.online ▷ remove ဖယ်ရှားပစ်ရန်
အိမ်တွင်တီဗွီကိုမကြာခဏကြည့်သူများသည်လှုပ်ရှားမှုမရှိဘဲအချိန်ကာလတစ်ခုကြာပြီးနောက်တီဗွီသည်အဝေးထိန်းခလုတ်ပေါ်တွင်အနီရောင်ခလုတ်ကိုနှိပ်မိသည့်အလားတီဗီသည်အလိုအလျောက်ပိတ်ပြီး standby mode သို့သွားကြောင်းသတိပြုမိကြသည်။ ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အခါငါတို့မထိတ်လန့်သင့်ဘူး၊ ရုပ်မြင်သံကြားပြတ်တောက်သွားပြီလို့မထင်သင့်ဘူး၊, စွမ်းအင်ချွေတာရန်တီဗီထုတ်လုပ်သူကဒီဇိုင်း မည်သူမျှရုပ်မြင်သံကြားလိုင်းများကိုပြောင်းလဲခြင်းသို့မဟုတ်အခြားလုပ်ဆောင်မှုများကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာ (ပုံမှန်အားဖြင့် ၂ နာရီအကြာတွင်) မလုပ်ဆောင်ဘဲတီဗီကိုပိတ်ထားသောအခါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအပြုအမူကိုမကြိုက်ပါကသို့မဟုတ်ရုပ်မြင်သံကြားကို ၃ နာရီထက်မကမရပ်မနားကြည့်လိုပါကဤလမ်းညွှန်တွင်သင့်ကိုပြပါလိမ့်မည် TV ပေါ်ရှိ standby မုဒ်ကိုဖယ်ရှားနည်း အဓိကတီဗီအမှတ်တံဆိပ်တွေထဲကတချို့အခြေအနေတွေမှာဒါမှမဟုတ်အမြဲတမ်းတီဗီလိုအပ်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေမှာ (ဥပမာ၊ စတိုးဆိုင်မှာတီဗီ၊ ကုမ္ပဏီကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုသိမ်းထားတဲ့တီဗွီ) မှာအော်တို standby mode ကိုချက်ချင်းထိန်းချုပ်နိုင်အောင်။ သက်ကြီးရွယ်အိုလူလားသို့မဟုတ်ကလေးလား)
TV ပေါ်ရှိ standby mode ကိုဘယ်လိုပိတ်ရမလဲ
preview တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း၊ အလိုအလျှောက် standby feature ကိုခေတ်မီတီဗီအားလုံးနှင့် smart TV များပေါ်တွင်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုမရှိဘဲကြာရှည်စွာထားခြင်းဖြင့်ပါဝါကိုပိုမိုသက်သာအောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ သို့သော်ထုတ်လုပ်သူတစ် ဦး ချင်းစီသည်ဤလုပ်ဆောင်မှုကိုချိန်ညှိနိုင်သည် ထို့အပြင်အားဖြင့် (အစောင့်ဆိုင်းအချိန်တိုးပွားလာ) လုံးဝပိတ်ပါဒါဆိုအကန့်အသတ်မရှိကြည့်လို့ရတယ် သို့သော်အဆုံး၌၊ အဝေးထိန်းခလုတ်ဖြင့်ပုံမှန်ပိတ်ထားရန်၊ စွမ်းအင်ချွေတာရန်နှင့်အသုံးအဆောင်၏သက်တမ်းတိုးရန်သတိရပါ။
LG TV ကိုအဆင်သင့်အနေအထားမှဖယ်ရှားပါ
LG Smart TV ရှိရင် Remote Control ရှိဂီယာခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးအလိုအလျောက် standby mode ကိုဖယ်ထုတ်နိုင်ပါတယ်။ ဆက်တင်အားလုံးမီနူးကိုရွေးချယ်ပါ ယေဘုယျ နောက်ဆုံးဒြပ်စင်ပေါ်တွင်နှိပ်ပါ timer.
ဖွင့်လှစ်သောဝင်းဒိုးကိုအသစ်ထဲမှာကျနော်တို့ကို item A ကိုပိတ်ထား2 နာရီအကြာတွင်ပယ် ၎င်းကိုနှိပ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ကအခြား shutdown timer ကိုသတ်မှတ်ထားပါက menu ကိုစစ်ဆေးသည် timer ကိုပိတ်ပါ, ပစ္စည်းသေချာအောင်အောင် ပိတ်ထားသည်။ တနည်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အသံကိုအတည်ပြုနိုင်သည် ဂေဟစနစ် mode (မီနူးအတွက်ပစ္စုပ္ပန် ယေဘုယျအသံကိုတက်ကြွလျှင်) ချွတ်အော်တိုပါဝါဒါကြောင့်သင်ကပိတ်ထားနိုင်ပါတယ်
Samsung TV ကိုအသင့်အနေအထားမှဖယ်ရှားပါ
Samsung TV များသည်အလွန်လူကြိုက်များပြီးသုံးစွဲသူများစွာသည်အလိုအလျောက် standby မုဒ်ကိုအနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်သတိပြုမိလိမ့်မည်။ သငျသညျက deactivate ချင်သောသူတို့အထဲ၌ရှိလျှင်, ငါတို့သည်ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်သည် မီနူး ဝေးလံခေါင်သီသောထိန်းချုပ်မှုအကြောင်း၊ အထွေထွေ -> စနစ်စီမံခန့်ခွဲမှု -> အချိန် -> အိပ်စက်ချိန် Settings item ကို disable လုပ်ထားလားစစ်ဆေးပါ (ပုံမှန်အားဖြင့် ၂ နာရီထားသင့်သည်။ ချိန်ညှိချက်များကိုပြောင်းပါ။ ) ပိတ်).
အထက်ပါနည်းလမ်းသည်အလုပ်မလုပ်ပါကပါဝါချွေတာခြင်းချိန်ညှိချက်များတွင် standby control ရှိမရှိစစ်ဆေးသင့်သည်။ ဆက်လုပ်ဖို့ငါတို့ဖွင့်လှစ် မီနူးယူကြစို့ အစိမ်းရောင်ဖြေရှင်းချက် သို့မဟုတ် အထွေထွေ -> ဂေဟစနစ်ဖြေရှင်းချက် အသံသည်တက်ကြွမှုရှိမရှိစစ်ဆေးပါ ချွတ်အော်တိုပါဝါဒါကြောင့်အမြဲတမ်းပိတ်ထားလို့ရတယ်။
Sony TV ကိုအဆင်သင့်အနေအထားဖြင့်ထားပါ
Sony TV များတွင်ကိုယ်ပိုင် operating system နှင့် Android TV အသစ်များပါ ၀ င်နိုင်သည်။ စနစ်နှစ်ခုလုံးသည်စွမ်းအင်ချွေတာပြီးအချိန်ကာလတစ်ခုအကြာတွင် input မရှိဘဲအလိုအလျောက် standby သွားသည်။ Android TV မပါဘဲ Sony TV များတွင် standby ကို disable လုပ်ရန်၊ remote control ရှိ Home / Menu ခလုတ်ကိုသာနှိပ်ပါ။ စနစ်ချိန်ညှိချက်များ -> Eco Idle TV standby တက်နေလားဆိုတာစစ်ဆေးပါ၊ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ disable လုပ်နိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့မှာ Android TV ပါတဲ့ Sony TV ရှိရင်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ CASAလမ်းကိုသွားကြစို့ ဆက်တင်များ -> စွမ်းအင် -> Eco standby mode ကိုပိတ်ပါ။ အချိန်ကာလတစ်ခုကြာပြီးနောက်၎င်းသည်အလုပ်မလုပ်ပါကသို့မဟုတ်ဖန်သားပြင်ပိတ်သွားပါကကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်ဖွဲ့စည်းပုံကိုစစ်ဆေးရပါလိမ့်မည် အိပ်မက်အချိန်ကြာမြင့်စွာလှုပ်ရှားမှုမရှိခြင်းအတွက် screen saver ကိုပြသသည့် Android feature တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆက်လုပ်ဖို့လမ်းကိုသွားကြစို့ ချိန်ညှိချက်များ -> TV -> Daydream နှင့်နောက်ဒြပ်စင်မှသေချာပါစေ ဘယ်အချိန်မှာအိပ်စက်ခြင်း mode မှာ အသံသည်ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်သည် မေ.
အချို့သောခေတ်မီ Sony စမတ်တီဗီများတွင်လည်းလူရှေ့မှောက်တွင်လူများ၏တည်ရှိမှုကို TV ၏ရှေ့မှောက်၌ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပြီးအပျက်သဘောစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ပါကတီဗွီကိုအဆင်သင့်အနေအထားသို့အလိုအလျောက်ထည့်သွင်းပေးသည်။ ဒီ groundbreaking feature ကို Menu ခလုတ်နှိပ်ပြီးလမ်းတစ်လျှောက်ငါတို့ကိုခေါ်ဆောင်သွားတာကိုပိတ်ထားနိုင်ပါတယ်။ Setting -> System Setting -> Eco -> Presence Sensor နှင့်ဖို့ item ထားကြ၏ ပိတ်.
Philips TV ကိုအသင့်အနေအထားမှဖယ်ရှားပါ
Philips တီဗီများတွင်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုစနစ် (သို့) Android တီဗီများပါ ၀ င်နိုင်သည့်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကွဲပြားစွာဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရပါလိမ့်မည်။ Android TV မပါသော Philips TV ရှိသူများအတွက်ခလုတ်ကို နှိပ်၍ standby mode ကိုဖျက်နိုင်သည် မီနူး / အိမ် အဝေးထိန်းခလုတ်တွင်မီနူးကိုဖွင့်နိုင်သည် အထူး O ယေဘုယျတက်ကိုနှိပ်ပါ timer နောက်ဆုံးဝင်ပေါက်ဖွင့်လှစ် ပိတ်ရန်, ဘယ်မှာကြှနျုပျတို့မှ function ကို configure ရန်ရှိသည်လိမ့်မယ် ပိတ်.
Philips TV သည်အသစ်ဖြစ်ပါကခလုတ်ကို နှိပ်၍ standby mode ကိုဖယ်ရှားနိုင်သည် မီနူး, လမ်းကိုကျွန်တော်တို့ကို ဦး ဆောင် Setting -> Eco Settings -> Sleep Timer နှင့်များအတွက် timer နေရာမှာထားကြ၏0(သုည) ။
Panasonic TV ကိုအဆင်သင့်အနေအထားမှဖယ်ရှားပါ
ကျွန်ုပ်တို့တွင်အချိန်အတန်ကြာမှသာပိတ်ထားသည့် Panasonic TV ရှိပါကခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်၎င်းကို fix နိုင်သည် timer (Panasonic ၏အဝေးထိန်းထိန်းချုပ်မှုပုံစံအမျိုးမျိုးတွင်တွေ့နိုင်သည်) နှင့်ဖွင့်လှစ်မည့်မီနူးအသစ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ရမှာအားလုံးသည်အရာဝတ္ထုအားပိတ်ထားရန်ဖြစ်သည် အလိုအလျောက်ကိုင်.
ကျွန်ုပ်တို့၏ Panasonic TV ၏ဝေးလံသောနေရာတွင် timer ခလုတ်မရှိပါ။ ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းပါဝင်သောဂန္ထဝင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုလိုက်နာ။ standby ကိုဖယ်ရှားနိုင်သည် မီနူး remote control ပေါ်တွင် Timer menu ကိုဖွင့်ပြီး Auto Power Off ကိုထားပါ ပိတ် ဒါမှမဟုတ်သူ0(သုည)
အကယ်၍ ရုပ်မြင်သံကြား၏အဆင်သင့်အနေအထားသည်ကောင်းမွန်သောရုပ်ရှင်ကြည့်နေစဉ်သို့မဟုတ်ပြင်းထန်သောမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲချိန်တွင် (ဆိုလိုသည်မှာ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်တီဗီဇာတ်လမ်းတွဲများစွာကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ကြည့်ရှုနေစဉ်) ကျွန်ုပ်တို့ကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေလျှင်၊ standby မုဒ်ကိုပိတ်ခြင်းသည်ထိရောက်သောဖြေရှင်းနည်းဖြစ်နိုင်သည် ဒါကြောင့်သင်အဝေးထိန်းကိုထိစရာမလိုပါ။ အနည်းဆုံးတစ်နာရီလျှင်တစ်ကြိမ်ရုပ်မြင်သံကြားသည်ကျွန်ုပ်တို့ရောက်ရှိနေကြောင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်စုံတစ်ရာကိုကြည့်နေကြောင်း“ နားလည်” စေရန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့တတ်နိုင်သမျှဤလမ်းညွှန်မှကျေးဇူးတင်ပါသည် ရုပ်မြင်သံကြားစက်များတွင် standby ပိတ်ပါ အဓိကကုန်အမှတ်တံဆိပ်တွေပေမဲ့ငါတို့ပြခဲ့တဲ့အဆင့်တွေ မည်သည့်ခေတ်မီတီဗီတွင်မဆိုကစားနိုင်သည်ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်အဝေးထိန်းကိုယူပြီးချိန်ညှိချက်များထည့်ပြီးတီဗီ၏အလိုအလျောက်ပိတ်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သောအရာတစ်ခုစီကိုစစ်ဆေးသည် - အဆင်သင့်၊ စွမ်းအင်ချွေတာမှု၊ Eco, Eco Mode သို့မဟုတ် Timer ။
များစွာသော standby လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသည် install လုပ်ထားသော operating system ပေါ် မူတည်၍ ပြောင်းလဲသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ရှေ့တွင်မည်သည့်စနစ်ရှိကြောင်းနှင့်မည်သို့ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရမည်ကိုချက်ချင်းနားလည်သဘောပေါက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းညွှန်များကိုဖတ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည် Smart TV လားဆိုတာဘယ်လိုသိမလဲ mi Samsung, Sony နှင့် LG App System အတွက်အကောင်းဆုံးတီဗီ.
ကျွန်ုပ်တို့ standby mode နှင့်ပြwithနာရှိသလားသို့မဟုတ် PC ကိုပိတ်နေသလား။ ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ဆောင်းပါးကိုဖတ်ရှုခြင်းအားဖြင့်ဆွေးနွေးမှုကိုပိုမိုနက်ရှိုင်းစေသည်။ ကွန်ပျူတာ၏ဆိုင်းငံ့ထားခြင်းနှင့် hibernation: ကွဲပြားခြားနားမှုနှင့်အသုံးဝင်မှုရှိစေရန်.